တိုက်ပွဲအသာစီးရနေတာတောင် စစ်ကောင်စီတပ်များကို CDMမှာပါဝင်ရန် အနုညွှန့်တောင်းပန်ပြီး ယဉ်ယဉ်ကျေးကျေး ပြောဆိုစည်းရုံးနေတဲ့ မင်းတပ် CDFတပ်ဖွဲ့ (ရုပ်/သံ) – Sport Gaber
တိုက်ပွဲအသာစီးရနေတာတောင် စစ်ကောင်စီတပ်များကို CDMမှာပါဝင်ရန် အနုညွှန့်တောင်းပန်ပြီး ယဉ်ယဉ်ကျေးကျေး ပြောဆိုစည်းရုံးနေတဲ့ မင်းတပ် CDFတပ်ဖွဲ့ (ရုပ်/သံ)
ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်များနှင့် စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တို့မှာ နေ့စဉ်ဆိုသလို နိုင်ငံ့နေရာတော်တော်များများမှာ တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတာပါ။
ထိုသို့ တိုက်ပွဲများဖြစ်ပွားစဉ် စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များဘက်မှ ပြည်သူလူထုရဲ့ အသက်အိုးအိမ်စည်းစိမ်ကို မစောင့်လျှောက်ယုံသာမကပဲ ရမ်းသမ်းပစ်ခတ်မှုများ မီးရှို့ဖျက်ဆီးမှုများရှိနေပေမယ့်
ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်များကတော့ တိုက်ပွဲအသာစီးရနေတာတောင် လက်ဉီးမှုရယူပြီးအရင် ပစ်ခေတ်ခြင်းမရှိပဲ ပြည်သူနဲ့အတူ ပူးပေါင်းရန် တိုက်တွင်းပြောဆို စည်းရုံးခဲ့ကြတယ်ဆိုတဲ့ သက်သေ Videoဖိုင်တစ်ခု လူမှု့ကွန်ယက် စာမျက်နှာတွေမှာ ပျံ့နှံ့နေပါတယ်။
အဆိုပါ videoဖိုင်တွင် မင်းတပ် CDFတပ်ဖွဲ့ ဝင်များက “ဒီနယ်မြေဟာ ငါတို့နယ်မြေ အကုန်လုံး ဒီတောင်ကျောအကုန်လုံး ငါတို့အကုန်လုံး မင်းတို့ကို ဝိုင်းထားပြီးပြီနော် မင်းတို့ကိုငါတို့ ဘာမှမလုပ်ဘူး အေးဆေး အဖမ်းခံပေးပါ။ အေးဆေးလက်နက်ချပေးပါ။”ဆိုပြီး ပြောဆိုနေသည့်ကို တွေ့ရသည်။
ဆက်လက်ပြီး ” အခုလာလို့ ရှိရင် ပိုက်ဆံ သိန်းငါးဆယ်လဲ ပေးမယ် လွတ်မြှောက်နယ်မြေကိုလဲ ပို့ပေးမယ် ထမင်းလဲ နပ်မှန်အောင်ကျွေးမယ် အခုလာပေးပါ။
အနုညွှန့်တောင်းပန်နေတာ မရလို့ရှိရင် ကျွန်တော်တို့ ပြန်ပစ်တော့မှာနော် ပိုက်ဆံမရချင်လို့ရှိရင် ကျည်ဆံပဲရမယ်နော်…. ” အစရှိသည့် ယဉ်ကျေးစွာ ပြောဆို စည်းရုံးနေမှုများလည်းတွေ့ရှိရသည်။
တိုကျပှဲအသာစီးရနတောတောငျ စဈကောငျစီတပျမြားကို CDMမှာပါဝငျရနျ အနုညှှန့ျတောငျးပနျပွီး ယဉျယဉျကြေးကြေး ပွောဆိုစညျးရုံးနတေဲ့ မငျးတပျ CDFတပျဖှဲ့ (ရုပျ/သံ)
ပွညျသူ့ကာကှယျရေးတပျမြားနှင့ျ စဈကောငျစီတပျဖှဲ့ဝငျတို့မှာ နေ့စဉျဆိုသလို နိုငျငံ့နရောတောျတောျမြားမြားမှာ တိုကျပှဲတှဖွေဈပှားနတောပါ။
ထိုသို့ တိုကျပှဲမြားဖွဈပှားစဉျ စဈကောငျစီတပျဖှဲ့ဝငျမြားဘကျမှ ပွညျသူလူထုရဲ့ အသကျအိုးအိမျစညျးစိမျကို မစောင့ျလြှောကျယုံသာမကပဲ ရမျးသမျးပဈခတျမှုမြား မီးရှို့ဖကြျဆီးမှုမြားရှိနပေမေယ့ျ
ပွညျသူ့ကာကှယျရေးတပျမြားကတော့ တိုကျပှဲအသာစီးရနတောတောငျ လကျဉီးမှုရယူပွီးအရငျ ပဈခတျေခွငျးမရှိပဲ ပွညျသူနဲ့အတူ ပူးပေါငျးရနျ တိုကျတှငျးပွောဆို စညျးရုံးခဲ့ကွတယျဆိုတဲ့ သကျသေ Videoဖိုငျတဈခု လူမှု့ကှနျယကျ စာမကြျနှာတှမှော ပြံ့နှံ့နပေါတယျ။
အဆိုပါ videoဖိုငျတှငျ မငျးတပျ CDFတပျဖှဲ့ ဝငျမြားက “ဒီနယျမွဟော ငါတို့နယျမွေ အကုနျလုံး ဒီတောငျကြောအကုနျလုံး ငါတို့အကုနျလုံး မငျးတို့ကို ဝိုငျးထားပွီးပွီနောျ မငျးတို့ကိုငါတို့ ဘာမှမလုပျဘူး အေးဆေး အဖမျးခံပေးပါ။ အေးဆေးလကျနကျခပြေးပါ။”ဆိုပွီး ပွောဆိုနသေည့ျကို တှေ့ရသညျ။
ဆကျလကျပွီး ” အခုလာလို့ ရှိရငျ ပိုကျဆံ သိနျးငါးဆယျလဲ ပေးမယျ လှတျမွှောကျနယျမွကေိုလဲ ပို့ပေးမယျ ထမငျးလဲ နပျမှနျအောငျကြှေးမယျ အခုလာပေးပါ။
အနုညှှန့ျတောငျးပနျနတော မရလို့ရှိရငျ ကြှနျတောျတို့ ပွနျပဈတော့မှာနောျ ပိုကျဆံမရခငြျလို့ရှိရငျ ကညြျဆံပဲရမယျနောျ…. ” အစရှိသည့ျ ယဉျကြေးစှာ ပွောဆို စညျးရုံးနမှေုမြားလညျးတှေ့ရှိရသညျ။
လှုံခြံရေးတင်းကြပ်လှတဲ့ ဝါဇီ‌ငွေထုတ်စက်ရုံမှာ ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ဖွား….